चायाबाट सजिलै मुक्तिः यी हुन् १० घरेलु उपाय - Sakaratmak Soch
हामीले अनुभव गरेकै छौं, जाडोमा कपालमा चाया पर्छ । तुलनात्मक रुपमा बढी जाडो याममा चायाले सताउँछ । जाडोमा दिनदिनै नुहाउन संभव हुँदैन । त्यसमाथि टाउकोलाई न्यानो बनाउन टोपी लगाइन्छ, स्कार्फले टाउको ढाकिन्छ । यसले गर्दा कपालको सौन्दर्य रुखो हुन्छ । चाया पर्छ । यतिबेला खास हेरचाहको अभावमा कपालमा अनेकौ समस्या आउँछ । चाया पनि यसैमा एक हो । यो टाउकोको छालामा रहेका मृत कोशिकाहरुका कारण पैदा हुन्छ । चायाले कपालको सौन्दर्य बिगार्छ, कपाल र्झन थाल्छ र टाउको चिलाउँछ । केहि घरेलु उपाय छ, जसले कपालको तमाम समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यहाँ हामीले कपालको सफाइ र स्वास्थ्यका लागि सिलसिलाबद्ध विधी पेश गरेका छौं ।
५. दही र मरिच
साेइजनको पातको रस लगाउँदा चाया खत्तम हुन्छ । सोइजनलाई उमालेर तयार गरिएको लेदो नुहाउँदा टाउकोमा सेम्पुको रुपमा प्रयोग गरियो भने यसले बजारमा उपलब्ध कुनै पनि भिटामिन ई युक्त सेम्पुले भन्दा राम्रो काम गर्छ ।
८. मेथीबाट उपचार
९. तिलको तेल
तिलको तेल लगाउँदा कपाल मकबुत, घना, लामो हुन्छ र साथै चाया पनि हट्छ । यसका लागि कपालमा तिलको तेलले मालिस गरौं । मालिसपछि कपाललाई तातो तौलियाले बफ्याउनु पर्छ । पाँच मिनेटसम्म यसो गर्नुस र त्यसपछि टाउका धुनुपर्छ ।